Weriye Maxamed Baaruud oo si mutadawacnimo ah wax uga beddelaya nolosha boqolaal qof oo ku jira xeryaha Dhadhaab. |
”Waxaan u adkeeysan waayay dhibaatada ka muuqata dadka aan codkooda la maqlin, ee waayeelada xanuunsan u badan”. ayuu yiri Maxamed Baaruud Xussen oo BBC-da la hadlay.
Lahaanshaha sawirkaMAXAMED BARUUD XUSSEN
Image captionWardo Saciid Axmed iyo saddexdeeda gabdhood.
”Gabdhahaygii hadda sidii hore wey dhamaan, lacagta naloo keenay waxay ahayd 30,000 oo Doolar, qaar Quraan ayaan ku saaray, qaarna guryo ayaan ugu dhisay, markii hore waxaan ahayn dad dugaag u eg haddana dad ayaan nahay” ayey tiri Wardo Saciid Axmed.
Lahaanshaha sawirkaMAXAMED BAARUUD
Image captionCaddeey Kunle Colow waxay ka mid tahay dadka uu caawiyey Maxamed Baaruud
”Aniga ayaa raadiyo dadka dhibaateysan, oo waxaan booqdaa xaafad kasto oo ku taal xereyaha, mar- marka qaarna dadka ayaa ila soo xiriiro oo ii sheega qofka caawimaadda u baahan, dhamaantood wey i yaqaanaan oo waxay hayaan telefoon lambarkeeyga oo waa ay i soo wacaan” ayuu yiri Maxamed Baaruud.
Image captionSacdiyo Yuusuf Cabdi oo gacanta ku haysata lacag uu u soo uruuriyey Maxamed Baaruud
”Dad waxaa jiro u arka shaqada aan hayo inay tahay khayaali, oo aan waqtigeyga ku luminayo. Waxaana ay i yirahdaan muqaalladan aad soo duubayso dano gaar ah ayaad ku wadataa, balse aniga waxaan u sheegaa oo aan u soo bandhigaa qofkii oo faraxsan lacagtiina aan gudoonsiinayo, sidaasi ayaana keentay in dad badan ay i aaminaan” sidaasi waxa yiri Maxamed Baaruud.